Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment अचानक धनी हुँदा मानिसले गर्छन् यी १४ काम, पढेर हुनुहुनेछ चकित ! - Pnpkhabar.com रोचक खबर
अचानक धनी हुँदा मानिसले गर्छन् यी १४ काम, पढेर हुनुहुनेछ चकित !
एक्कासी धनी भएपछि के गर्नुहुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने हरेक मानिसले यो गर्छु, त्यो गर्छु भनिहाल्छन् । अचानक धनी भएका मानिसको अनुभवबाट प्रायः हरेक मानिसले अनौठा काम गर्ने देखिएको छ । तपाई पनि यिनै काम गर्छु भन्नुहुन्छ होला, होइन त ?